क्यान्सर सतर्कता दिवसमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम « Bagmati Page
चितवन । वीपी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले १७ औं क्यान्सर सतर्कता दिवस तथा अस्पतालको २२ औं वार्षिकोत्सव अन्तर्गत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सो अस्पतालले विभिन्न सामाजिक संघ-संस्थाको सहकार्यमा विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाएको हो ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतमका भनाई अनुसार हिजो सोमबार अस्पताल गेटदेखि बुद्धचोकसम्म पर्चा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । क्यान्सर सेवा समाजको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
यसैगरी आज मंगलबार क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम गरिंदै छ । अस्पतालको बहिरंग विभागमा हुने उक्त कार्यक्रममा अस्पतालको क्यान्सर रोकथाम विभाग र क्यान्सर सेवा समाजको सहयोग रहने छ । कार्यक्रम बिहान ९ः३० बजेबाट हुने बताईएको छ ।
त्यसैगरी असोज ७ गते अस्पतालको सिर्जनशील समाजको सहयोगमा भरतपुरको बेलचोकमा बिहान ११ बजेबाट क्यान्सर स्क्रिनिङ्ग कार्यक्रम हुने छ । असोज ७ गते दिउँसो २ बजे लायन्स क्लब र क्यान्सर सेवा समाजको सहयोगमा बिरामी कुरुवाघर भवन शिलन्यास कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमले बताएका छन् ।
असोज ८ गते लायन्स क्लब अफ गैंडाकोटको सहयोगमा गैंडाकोटको केलादीमा क्यान्सर स्क्रिनिङ्ग कार्यक्रम आयोजना राखिएको छ । सप्ताहको अन्तिम दिन असोज १० गते अस्पतालमै वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजना गरिने उनले जानकारी दिए ।
क्यान्सर रोग रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि अस्पतालले विविध गतिविधि गर्दै आएको छ ।